Dagaalo ka dhacay qeybo ka mid ah gobolka Gedo ee Soomaaliya – SBC
Dagaalo ka dhacay qeybo ka mid ah gobolka Gedo ee Soomaaliya
Deegaan lagu magacaabo Sadaxtiirood oo ku dhow deegmada Buusaar ee gobolkaasi Gedo ayaa waxaa laga soo sheegayaa dagaalo maanta ka dhacay kuwaas oo ay isaga horyimaadeen ciidamada DKMG ah kuwa Kenya oo isgarabsanaya iyo weliba Xoogaga xarakada Shabaab Almujaahidiin.
Dadka deegaanka ayaa xaqiijinaya in dagaalkii halkaasi ka dhacay uu ahaa mid aad iyo aad u culus islamarkaana la isku adeegsaday hubkna cul culus, isagoona soconayay mudo saacado ah sida ay xaqiijiyeen.
Ilaa iyo iminka ma jiraan warar xaqiijinayaya khasaarihii ka dhashay dagaalkaasi, waxaase ay dadka qaarkii sheegayaan in ay jiraan khasaare dhinac walba leh oo soo kala gaalay labadii dhinac ee dagaalamay.
Marka laha tago khasaaraha la sheegay ee aan weli la xaqiijin inta u la egtahay ayaa hadana waxaa hadalo is dhaafsan ka soo kala saaray labadii dhinac ee dagaalamay,
Gudoomiyaha Maamulka gobolkaasi Gedo ugu magacaaban DKMG ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Kaliil aya la hadlay saxaafada gobolka isagoona sheegay in guulo la taaban karo ay ciidamada DKMG ah ka soo hoyeen dagaaladii maanta dhacay .
Dhinaca kale Masuul u hadlay xarakada Shabaab Almujaahidiin ayaa isna sheegay in dagaalkii maanta dhacay ee ay la galeen dhinaca kale ay ka gaareen guulo wax ku ool ah islamarkaana uu sheegtay in ay khasaare baahsan u geysteen ciidamada DKMG ah iyo kuwa Kenya .
Sikastaba ha ahaatee dagaaladan ayaa waxaa ay qeyb ka yihiin dagaalo maalmihii ugu dambeeyay ka taagnaa gobolka kaas oo ay isku horfadhigeen dhinacyaada Xarakada Alshabaab iyo kuwa DKMG ah iyo Kenya oo iskaashanaya.